सुशान्तका बुवाले प्रेमिका रियालाइ लगाए यस्ता १० ग’म्भीर आरोप – Aaj ko Sandesh
बर्दियामा जब बिहे गरेर लागेकै रात श्रीमतीको मृ’त्यु भयो …(भिडियो)
म कञ्चनलाई माया गर्छु भन्दै यसरी सबै कुरा खुलाएकी रहिछन अनिशाले…तर सबै ढिलो भयो…अनिशाको आशु नै आशु
मुख्य पृष्ठ /News/सुशान्तका बुवाले प्रेमिका रियालाइ लगाए यस्ता १० ग’म्भीर आरोप
काठमाडौं । अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत गत जुन जुन मुम्बईको बान्द्रामा उनको घरमा मृ त अवस्थामा फेला परेका थिए। पुलिसले अनुसन्धानले उनले देह त्याग गरेको जनायो । सुशांत सिंह राजपूतको निधन भएको एक महिना भन्दा बढी भएको छ। उनका बुबा केके सिंहले छोरा सुशांत सिंह राजपूतकी प्रेमिका रिया चक्रवर्ती र उनको परिवार बिरूद्ध एफआईआर दर्ता गरेका छन्। केके सिंहले आफ्नो एफआईआरमा रिया चक्रवर्तीमाथि ग’म्भीर आरोप लगाएको छ। भारतीय मिडियाले जनाए अनुसार उनले लगाएका आरोप यस्ता छन् ।
आरोप नम्बर एक : सुशांत सिंह राजपूतका बुबाले भनेका छन् सन् २०१९ अघि मेरो छोरा सुशांतलाई कुनै पनि प्रकारको मानसिक समस्या थिएन, रिया चक्रवर्तीको सम्पर्कमा आउँदा अचानक के भयो, सुशांत सिंहलाई मानसिक विचलित बनाउन उनले त्यस्तो के गरिन् ?
आरोप नम्बर दुई : यदि सुशांत सिंह राजपूतको मस्तिष्कको उपचार भैरहेको थियो भने किन उनको परिवारबाट कुनै लिखित वा मौखिक अनुमति लिइएको छैन। किनभने जब कोही मानसिक रूपले बिरामी छ, उसको सबै अधिकार उसको परिवारसँग छ, यसको अनुसन्धान गरिनु पर्छ।
आरोप नम्बर तीन : मेरो छोरा सुशांत सिंहको संरक्षकको रुपमा रिया चक्रवर्तीलाई किन ब्यवहार गरियो ? मलाई लाग्छ यी डाक्टरहरू पनि रियाको सबै षडयन्त्रमा संलग्न थिए। यसको अनुसन्धान गरिनु पर्छ किन उनीहरुले परिवारको अनुमति विना उपचार गरे । मेरो छोरालाई कुन औषधि दिइयो यस बारे थाहा हुनुपर्दछ।
आरोप नम्बर चार :जब रियाले थाहा पाइन् कि सुशांत सिंह राजपूतको मानसिक अवस्था खराब छ, यस अवस्थामा उनीले एक्लै उपचारको जिम्मा लिने मेरो छोराको उपचाको सबै किन लगिन् ? उनले त्यहि समयमा, मेरो छोरालाई त्यो नाजुक अवस्थामा छोडेर हिडिन् र ऊसँगको सबै सम्पर्क अन्त्य समेत गरिन् , त्यसैले मेरो छोरोले देह त्याग गर्‍यो।
आरोप नम्बर पाँच : सुशांत सिंह राजपूतका बुबाले भने कि मेरो छोरा फिल्मको रेखा छोडेर केरलामा जैविक खेती गर्न चाहन्थ्यो, उसको साथी महेश उनीसँग जान तयार थिए, तब रियाले विरोध गरिन् र उसलाई कतै जान दिइनन् । यदि उनले भनेको नमानेर मेरो छोरा गएभने आफुसंग भएका सबै मेडिकल रिपोर्ट समेत मिडियालाई दिने ध म्की दिइन् । उसको स्वास्थ्य अवस्थाका बारेमा सबै सार्वजनिक गर्ने चेतावनी दिइन् ।
आरोप संख्या छ : रिया चक्रवर्तीको बैंक ब्यालेन्स पनि कम हुँदै गइरहेको थियो, त्यसैले रियालाई लाग्यो कि सुशान्त अब उनको लागि कुनै काम लाग्दैन । यस पछि जून ८ सम्म रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूतसँगै बसिन् र सबै नगद, गहना, ल्यापटप, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड र उसको पिन नम्बर, सबै आवश्यक कागजात र सुशान्तको उपचार कागजात लिएर घर गइन्।
आरोप नम्बर सात : रिया चक्रवर्तीले उनको फोनमा सुशांत सिंह राजपूतको फोन नम्बर ब्ल’क गरेकी थिइन् । यस पछि सुशांतले आफ्नी बहिनीलाई बोलाए र उनले भने रियाले मलाई कतै अप्ठेरोमा पार्नेछ । उनी यहाँबाट मलाई छोडेर गएकी छन् । मलाई ध म्की पनि दिएकी छन् यदि तिमीले मेरो कुरा सुनेनौ भने तिम्रा सबै कागजातहरू मिडिया सामु सार्वजनिक गरिदिन्छु । तिमीलाई पागल सावित गरिदिन्छु ।
आरोप नम्बर आठ : सुशांत सिंह राजपूतका बुबाले एक विज्ञप्तिमा भनेका छन् जून ८ मा, सुशांतले सँग गोप्य रूपमा राखेको दिशा नामकी सेक्रेटरीले देह त्याग गरेपछि जस पछि मिडियामा धेरै समाचारहरू फैलिन थाल्यो । यो विषयले पनि छोरालाई नकारात्मक असर पर्यो । त्यती बेला सहाराको लागि मेरो छोराले रियालाई सम्पर्क गर्न कडा परिश्रम गर्यो तर रियाले मेरो छोराको नम्बर ब्लक गरेकी थिइन् । मेरो छोरा भित्र गहिरो चिन्ता थियो कि रियाले उनलाई कुनै आरोप नलगाउन् । सुशान्तलाई दिशाको निधनमा पनि आफुलाई रियाले जिम्मेवार बनाउँछ की भन्ने शंका थियो ।
आरोप नम्बर नौ : मेरो छोराको कोटक महिन्द्राको बैंक खातामा करिब करोड रुपैयाँ थियो, पछिल्लो बर्षमा केहि करोड निकालिएको थियो । तर त्यो पैसा निकाल्न मेरो छोरासंग कुनै अनुमति लिइएन । मेरो छोराको सबै खाता जाँच गरिनु पर्छ। यी बैंकबाट कति पैसा आएको थियो क्रेडिट कार्ड रिया चक्रवर्तीले आफ्नो परिवार र साथीहरूसँग ठ’गी र षडयन्त्र गरेर प्रयोग गरे ।
आरोप नम्बर दस : यस घटना हुनु अघि सुशांत सिंह राजपूत अभिनयको संसारमा एक ठूलो नाम थियो, त्यसोभए के कारण छ कि रियाको आगमन पछि, सुशांत सिंहको फिल्म कम हुँदै गयो । यो कुराको पनि अनुसन्धान हुनुपर्छ ।
जिवनभर पार्टीकै लागि भनि बाँचेका, पूर्वमाओवादी कमाण्डरले भेरी नदीमा हा’मफालेर आ’त्मह’त्या ! आखिर किन ?
साउन महिनामा करिश्माको नक्कल (तस्वीरहरू)
नेपालमा कोरोनाबाट आज थप एकको मृत्यु, कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या १०० नाघ्यो
७ वर्षसम्म लिभिङ टुगेदरमा बसेकी युवतीलाई बिहे नगरी…